क्राइष्टलाई झैँ काँटी ठोकी,
महान बनाइदिउँ झैँ लाग्ने !
हुसेनलाई झैँ पासो लगाई,
अमर बनाइदिउँ झैँ लाग्ने !
बास छ एउटा सभामा !
अश्लिलता नै लजाउने,
रास छ एउटा सभामा ।
मर्नै नपरी यिनेर्लेनै,
फुत्तै बैतर्नी तार्लान जस्ता ।
खेल्न मागे बालकहेर्ले,
तारै ऐले झार्लान् जस्ता !
दक्षिण तिर बगाएर,
उत्तर तिर खोजौँ लाग्ने !
दुई चार झापड पड्काएर,
दुख्यो !!?? भनि सोधौँ लाग्ने !
मति भर्ने महात्मा भए,
उनैको सामु थुपार्नु हुन्थ्यो !
कोपार्नु सम्म कोपार्नु हुन्थ्यो,
चिउँडै सम्म लोपार्नु हुन्थ्यो !
~ घिमिरे सुनिल
Rabindra August 1, 2012 at 11:47 AM
गजब लाग्यो कविता !
Ramu August 1, 2012 at 11:49 AM
कस्तो कुरा गरेको बिहानै,
आचि अर्न पनि गारो हुने,
अश्लिलता त लजाई सक्यो,
के अर्ने हो अरि हाल,
के अर्ने हो अरि हाल!!!!!!!!!!
Nabin Poudel August 1, 2012 at 11:50 AM
sarai ramro lekh yaslai ajai badayera lanus hai !!!
acpmasquerade August 1, 2012 at 11:50 AM
अश्लिलता प्रयोग नगरेर अरु थोक नै प्रयोग गरे सायद अझ अर्थ खुल्थ्यो कि
यस्तै लाग्यो मलाई चाहिँ